2Face-2 whatsapp & social apps များအတွက် Accounts Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » WhatsApp & လူမှုရေး apps တွေအတွက် 2Face-2 Accounts ကို
WhatsApp & လူမှုရေး app များကို APK ကိုများအတွက် 2Face-2 Accounts ကို
2Face သင်သည်အခြား Multi-အကောင့် apps များနှင့်အတူပွင့်လင်း WhatsApp မဟုတ်နိုင်လျှင် WhatsApp, ဿုံ running ကျနော်တို့သဟဇာတ, WhatsApp များအတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးစုံအကောင့်ဖြစ်ပါသည်, 2Face ကိုရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီး
2Face အကွိမျမြားစှာ Accounts ကိုသငျသညျ clone အကူအညီနဲ့ Master နှင့်တဦးတည်းဖုန်းပေါ်မှာတစ်ပြိုင်တည်းအွန်လိုင်းမျိုးစုံလူမှုရေး & ဂိမ်းအကောင့်ကို run ။
သင်တဦးတည်းဖုန်းပေါ်မှာနှစ်ခု WhatsApp ကိုကနေမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်လိုပါသလား?
သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုက Facebook အကောင့်ကိုအသုံးဖို့လိုသလား?
2Face အကွိမျမြားစှာအကောင့်အရှငျဘုရား, apps များမွေးထုတ်ရန်တဦးတည်းphone.:🖲️ One-ကိုထိပုတ်ပါအပေါ်တူညီတဲ့လျှောက်လွှာများအများအပြားအကောင့်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုအလွယ်တကူ Facebook က, WhatsApp ကိုများအတွက်မျိုးစုံအကောင့် add, Twitter QQ, WeChat နှင့်အခြားလူမှုရေးဖြစ်ပါတယ် apps များ, အပုံတူမျိုးပွားအကောင့်တစ်ခုနှင့်အဓိကအကောင့်များအကြား data တွေကိုသီးခြားသိမ်းထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။
🌟 တဦးတည်းကိရိယာပေါ်တွင်တစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားအကောင့်ကို run ။
ထိုကဲ့သို့သော WhatsApp ကို, Facebook, Twitter ကဲ့သို့တူညီသောဖုန်းကိုတည်ငြိမ်ရဲ့ login နှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်မျိုးစုံအကောင့်များအတွက်ပံ့ပိုးမှုသင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်မှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဆွေများကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်, သင်တို့သည်လည်းအလုပ်နှင့်လူနေမှုအာကာသအကြားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်;
🌟 အသုံးပြုသူရဲ့ privacy နှင့်လူမှုရေးအကောင့် password ကိုသော့ခတ်ကိုအသုံးပြုဖို့ကာကွယ်ပါ
•ဝှက်အသုံးပြုသူများသည် '' လျှို့ဝှက်ချက် app များကိုသာလျှို့ဝှက်အာကာသအတွင်း app များကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်မျက်စိ prying စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ။
•လုံခြုံရေးသော့ခတ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူ privacy ကိုကာကွယ်ပါ။
ဒါကြောင့်ဂိမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးအောင်သို့မဟုတ်နှစ်ဆအတွေ့အကြုံကိုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ, တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုဂိမ်းအကောင့်ကိုသုံးပြီး, အလွန်ရိုးရှင်းပြီးဖြစ်လာကြပြီ
ပိုကောင်း privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ WhatsApp များအတွက်အတုတစ်ဦးကို virtual တည်နေရာ။
🌟 အရှိန်မြှင့်ရန် one-ကိုထိပုတ်ပါ cleanup
သင်ကအကောင့်ကိုမာစတာသည်မှတ်ဉာဏ်အပေါ် running app များကသိမ်းပိုက်မှတ်ဉာဏ်ဟာပြေးမြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်တွေ့မြင်နိုင်သည်;
🏆သေးငယ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်, အနိမ့် CPU ကိုစားသုံးမှုသိမ်းပိုက်
🏆အတုတည်နေရာ, privacy ကိုပိုပြီးလုံခြုံ
▶ခွင့်ပြုချက်များ: အကောင့်မာစတာစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့ကဆက်ပြောသည်သည့် apps များအားဖြင့်အချို့လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အကောင့်မာစတာသင့်တည်နေရာအရခွင့်မပြုပါဘူး, အကောင့်မာစတာအပေါ် running တချို့ apps များတွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းမှသင့်တည်နေရာကိုပေးပို့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကကာကွယ်ပေးဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များမဆိုစုဆောင်းကြပါဘူး။
▶မှတ်ဉာဏ်: Account မာစတာသူ့ဟာသူအတွက်မှတ်ဉာဏ်သိမ်းပိုက်မထားဘူး, တကယ်တော့ဖုန်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်, ဘက်ထရီများနှင့်ဒေတာများမပယ်မရှားပါဘူး။
▶သတိပြုပါ: အချို့သောလူမှုရေး apps များအချို့ Third-party apps များများအတွက် whitelist သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်စာရင်းအကောင့်မာစတာ add, အချိန်အတွက်ကိုအပ်ကြသည်များအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျများသေချာစေရန်။
▶ပဋိပက္ခများကြောင့်အချို့သော application ကိုကန့်သတ်, သင်တူညီတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုပြီးအချို့သောလူမှုရေး apps တွေအတွက်အကောင့်နှစ်ခုဖွင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်အကောင့်ကိုမာစတာပေါ်တွင်သင်၏ဒုတိယအကောင့်သည်သင်၏အခြားမိုဘိုင်းနံပါတ်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
WhatsApp & လူမှုရေး apps တွေအတွက် 2Face-2 Accounts ကို
6.79 ကို MB
ThinkMobile Inc က
Multi Parallel - …